चुनावको बाछिटा : परदेशी नेपालीको कामना
मंसिर १७, २०७४| प्रकाशित २०:१९
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरु यतिबेला चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। तर, प्रचार अभियान हेर्दा विरक्तलाग्दो स्थिति छ। मतदातासामु आफ्नो पार्टीको एजेण्डा बताएर भोट माग्नुको साटो अर्को पार्टीका उम्मेदवारलाई कटाक्ष गर्दै तल देखाउने काम भइरहेको छ।
यसरी हिलो छ्याप्ने कार्यमा आफूलाई प्रजातन्त्रको एकमात्र ठेकेदार ठान्ने नेपाली कांग्रेसदेखि अनेकौं चिरामा विभक्त कम्युनिस्ट दलहरु अगाडि छन्।
यस पटक प्रमुख कम्युनिस्ट दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भने चुनावी गठबन्धन गरेर मैदानमा उत्रेकाले एकले अर्काको खेदो गर्ने बाटो रहेन। यसले सर्वसाधारणलाई केही राहत दिएको छ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ का कांग्रेस उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले आफूले नजिते लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने र आफूले जिते प्रधानमन्त्री हुने दाबी गरिरहेका छन्। भन्नै लाज मान्नुपर्ने कुरा गरेर नेता सिंहले आफ्नो बौद्धिक हैसियत त देखाए। तर, बुझ्न नसकेको कुरा के भने, भोलि उनी प्रधानमन्त्री नै भए पनि त्यस क्षेत्रको एउटा सामान्य जनतालाई खास फाइदा के होला?
नेता सिंह विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्रलाई तल्लो स्तरमा ओर्लेर आरोप लगाउन पनि पछाडि परेका छैनन्। मिश्रले जितेमा पनि झिलिक्क बती बले जस्तो चमत्कार हुने त होइन, तर जनताले उनलाई नै मत दिन्छन् भने जनमतको सम्मान गर्नु प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने हरेक व्यक्तिको कर्त्तव्य हुन्छ।
मिश्रमाथि लगाइएको अनेकौं आरोपमध्ये सबैभन्दा हाँसो उठ्ने आरोप छ- उनका छोरोले क्याम्ब्रिजबाट ए लेभलमा वर्ल्ड टप गरेकाले उनी प्रजातन्त्रप्रति समर्पित छैनन्। प्रजातन्त्रप्रति समर्पित हुन छोराले राम्ररी पढ्न हुँदैन? प्रजातन्त्रप्रति समर्पित भएको मापदण्ड के हो?
अघिल्ला चुनावहरुमा जस्तै यो चुनावमा पनि कांग्रेसले बिपीको सपना र वाम गठबन्धनले मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न आफूलाई विजयी गराउन मतदातासँग आग्रह गरेका छन्। यी कहिल्यै कसैले पूरा गर्न नसक्ने सपनासँगै यस पटक त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सपना पनि थपिएर आएको छ।
आजसम्म कांग्रेसले पनि थाहा नपाएको त्यो अमूर्त सपना भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एक्लैले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ। किनकि गिरिजाप्रसादको सपना पूरा गर्छु भनेर आजसम्म कांग्रेसका कसैले पनि चुइँक्क बोलेका छैनन्।
चुनाव नजिकिइरहँदा सर्वसाधारण नागरिकका रुपमा मैले बुझ्न नसकेको एउटा कुरा के भने, हरेक नेतालाई लक्षित गरेर सभा वा निवासमा बम पड्काइँदै छ, तर बम पड्काउने मुख्य दोषीलाई पक्राउ गर्न सकिएको छैन। दुई वटा प्रहरी संगठन र सेनाले पनि आजसम्म पक्राउ गर्न नसकेको त्यो योजनाकार को हो? कतै चुनावमा भोट तान्नका लागि प्रायोजित तरिकाले सरकार आफैंले त यस्तो घटना गराइरहेको छैन? होइन भने चुनाव नै बिथोल्ने गरी गराइएको यस्तो जघन्य अपराधबारे सत्य-तथ्य बुझेर आम जनतालाई ढुक्क गराउनु सरकारको कर्त्तव्य हो।
अन्तमा यो चुनावपछि एउटा स्थिर सरकार बनोस् र देशमा विकास तथा शान्ति आओस् भन्ने कामनासहित सम्पूर्ण उम्मेदवारलाई शुभकामना छ। जितपछि प्रतिनिधिले पार्टीगत रुपमा कसैलाई काखा-पाखा नगरी फराकिलो छाती बनाएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाऊन्। यो विदेशमा बस्ने सबै नागरिकको कामना हो।